Tplf tarsiimoo imaammata sammicha fi ummata burjaajessaa jira. Kutaa 3faa
University Oromiyya irraa
Kutaa 3ffaan qophii kan mata duree lama qaba
1 miidhaa fi hacuucca saba oromoo irra ga'aa jiru;
2 sabni oromoo akkamiin bittaa alagaa jalaa ba'uu akka danda'uudha.
1 Hacuuccaa fi gocha farrummaa tplf ummata oromoo irratti raawwataa jiru. Waggoota 21 kaasee tplf ummata oromoo irratti gocha farrummaa,genocide, torch and degradin human treatment jedhamee international treaty kanneen akka udhr,iccpr,cedawfi regional treaty kannen akka afrikan charter,european charter, inter american human right charterin dhorkaman ummata oromoo irratti raawwachaa jira. Fkn 1 dachee fi ummata oromoo qoqqooduun gargar hire, kannen akka finfinnee fi dirre dawwaa oromiyaa irra kute 2 qotee bulaa oromoo abbaa lafummaa oromiyaa irraa mulqatee investi maqaa jedhuun ummata oromoo baadiyyaa fi magaalaa dachee abbaa isaa dhabsiisee habashootaaf hiree oromoo galtuu taasisee suuqa suuqatti galchaa jira. 3 lafa oromoo fo'aa irra kaa'ee safaree akka mudhii durtii qamisii hodhisiifattuutti oromoo gatii mudhii humnaan olii gibira fakkeessuun saamaa jira. Kanneen gibira kana baasuu hin dandeenye mirga abbaa lafummaa isaatu irraa mulqamaa jira 4 biyyee oromiyaa keessaa tigraayitti fe'uun dachee oromiyaa biyyoo diimaa qofa hambisee,tigraayiin magarisa uffachiise 5 lammii oromoo fi saba biroo walitti buusuun oromoo nagaa fi bultii dhorkachaa jira fkn dhuma bara 2004 oromoo booranfigujii saba sumaalee wajjin walitti buusuun, tplf oromoo booranaa fi gujii kaan saamee,kaan mana hidhaatti ukkaamsee kaan immoo galaafate,30000 ol kanneen ta'an immoo keeniyaatti baqatan lubbuu isaanii oolfachuuf,qabeenya isaanii gatanii 6 barataa oromoo rasaasaan reebani ,kaan lafee cabsan, kaan ija jaamsanii ,kaan milla kutanii oromoota fixe. 7 dargaggoo fi shamarran oromoo abbaa biyyummaa dhorkachuun osoo lafa qabani,osoo lammii qabanii galtuu ta'anii lubbuu isaani olfachuuf biyya hambaa taa'u.
Keessumaa shamarran oromoo ardii eeshiya keessatti kan godaana yoo xiqqaate billiona lamaa ol kan ta'aniidha. Shamarran oromoo biyya hambaatti ari'uun tplf osöo biyya qabanii Biyya isaanii keessatti akka lammii lammffaatti ilaalamanii biyya hambaa kessatti baqatan midhaan hagana jedhamee tilmaamuun isaa nama rakkisu irra ga'aa jira. Fkn biyya arabaa keessatti guyyaati guyyaatti kumaan kan lakkaawwaman gudeeddii seeraan alaa irratti raawwachaa oola,kan gola hormaa keessa akka garbaattii hojjetu, kaan miindaa dhorkatamu,kaan dubartiin arabaa gamoo irraa darbachuun lubbuun shamarran keenyaa akka tusseetti osoo hin lakka'in ajjeefamaa olu 8 hojjetaa mootummaa dirqamaan tplf buusii miseensummaa,abbaayin hidhuu jechuun yoo xiqqaate 25% miindaa irraa kutee hojjetaan mootummaa nyaataa fi kira manaa of irraa kaffaluu dadhabee hojii gadi dhiisaa jira.
1. Dhaani tplf barataa,qoteebulaa,daldalaa fi hojjetaa mootummaa irraan dhiibbaa siyaasaa,hawaasummaa irran ga'uu isaa tokkoo tokkoon lammii oromoo beekuu fi wal barsiisuu qaba. 2. hacuuccaa kana of irra mulquuf gurmaa'uu ,qabsaa'uu ,abba biyyummaa ta'uuf murannoo qabaachuu. 3. tokkummaa lammii oromoo jabeessuu,walkakaasuu, walbarsiisuu, biyya hambaatti godaanuu dhiisuu 4. qabeenyaa fi meeshaa waraanaa wal-tumsuun saamuu,habashoota biyya oromoo keessa jiran saamuun .beenyaa kuufachuu 5. dhaaba abo fi gumii paarlaamaa oromoo fi gadaa dot com websiti fi facebook,emalin sagantaa isaanii hordofuu fi quunnamuu 6. deggertoota tplf rakkisoo ta'an dhiiga ilmaan oromoo dhangalaasaa turan irratti waltumsuun hanga dhabamsiisuutti socho'uu 7. riphee lolaa abo biyya keessa jiran gargaaruufi tooftaa lolaa irraa barachuun diina irratti tarkaanfii fudhachuu 8 unversiity, kolleejjiifi mana barumsaa sadarkaa lammaffaa keessatti wal ijaaruu tarkaanfii waliinfudhachuufi k.k.f yoo hojjenne ummata oromoo dheebuu bilisummaa baasuufi abbaa biyyumma oromoo mirkaneessuu dandeenya .
INJIFANNOON UMMAATA OROMOOF !!!